साथीसँग मिलेर टिकटक भिडियो बनाउँदै गर्दा थाहै नपाइ साथीको हत्या गरे, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
साथीसँग मिलेर टिकटक भिडियो बनाउँदै गर्दा थाहै नपाइ साथीको हत्या गरे
काठमाडौं। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा १९ वर्षका युवकले चलाएको गोली लागेर एकको मृत्यु भएको छ । ती युवकले साथीलाई बन्दुक देखाउँदै भिडियो बनाइरहेका बेला यस्तो घटना भएको हो । पुलिसले यसबारे आइतबार जानकारी दिएको हो ।
पुलिसका अनुसार शनिबार राती सलमान नामका एक व्यक्ति आफ्ना साथी सोहेल र आमिरसँग इन्डिया गेटको यात्रामा निस्किए । फर्कने बेला, कार चलाइरहेका सलमान नजिकै बसेका सोहेलले बन्दुक निकाले । टिकटकमा भिडियो बनाउँदै सोहेलले सलमानलाई बन्दुक ताके तर त्यसबाट निस्केको गोली सलमानको बायाँ गालामा लागेको पुलिसले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार घटनाका बेला आमिर पछाडिको सिटमा बसेका थिए । घटनापछि दुई साथी आत्तिँदै सोहेलका दर्यागञ्जस्थित आफन्तकोमा गए र रगत लत्पत्तिएको लुगा फेरे । त्यसपछि उनीहरुले सलमानलाई नजिकैको एदएनजेपी अस्पताल पुर्याए । डाक्टरले त्यहाँ उनको मृत्यु भइसकेको घोषणा गरे ।
सलमानलाई अस्पताल भर्ना गरेलगत्तै उनीहरु त्यहाँबाट भागे । बेलुकी करिब सवा ११ मा अस्पताल प्रशासनले पुलिसलाई खबर गरेको बताइन्छ । आमिर, सोहेल र सरिफ नामका एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको पुलिसले जानकारी दिएको छ ।
सलमानलाई गोली चलाएको आरोपमा, आमिरलाई हतियार जमिनमा गाडेको र घटनास्थलमा नभएका सरिफलाई रगताम्मे लुगा जमिनमा पुरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको पुलिसले बताएको छ । सलमानको पोष्टमार्टम सोमबार गरिने जानकारी दिइएको छ । बन्दुक नियतवश वा दुर्घटनावश चलेको बारे अनुसन्धान गरिने जानकारी पुलिसले दिएको छ ।
सलमानका एक आफन्तले भने, ‘उसका दुई साथी अघिल्लो राती आए र इन्डिया गेट जाऔं भने । त्यसकारण सलमानले आफ्नो कार निकालेर साथीहरुसँगै घुम्न निस्किए । घटनाबारे पुलिसमार्फत् जानकारी पाएपछि हामी अस्पताल पुगेका हौं,’ उनले भने । आफन्तका अनुसार घरका कान्छा छोरा सलमानका एक दाइ र एक दिदि छन् । उनको बुवाको ज्याकेट र जिन्सको व्यवसाय छ ।